Teo am-piandrasam-paty : valo mianaka indray maty nihotsahan’ny tany | NewsMada
Teo am-piandrasam-paty : valo mianaka indray maty nihotsahan’ny tany
Ny alin’ny alahady teo no efa nanomboka ny fikarohana, omaly maraina vao hita avokoa ny fatin’ireo valo mianaka, nihotsahan’ny tany. Teo am-piandrasam-paty no nitrangan’ity loza mahatsiravina ity, tao Ivory Avaratra, akaikin’ny Gara (FCE) ao Fianarantsoa.
Maty tototry ny tany niaraka tamin’ny trano ireto fianakaviana niharam-boina ireto. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, vokatry ny takaitra navelan’ny rivodoza Ava no nitarika ny loza satria nanao sesilany ny rotsak’orana tao an-tanàna ka niafara tamin’ny fihotsahan’ny tany tao amin’io fokontany io ka izao namoizana fianakaviana valo mianaka izao. Nisy fiandrasam-paty tao amin’ny trano iray, kanjo nihotsaka tampoka ny tany teo ambonin’ilay trano. Trano maromaro somary mitandahatra no eo ambanin’ilay tany nihotsaka, saingy tao amin’ilay trano nisy fiandrasam-paty no nifatratra izany ka izao namoizana ain’olona maro izao. Hataraina ny an’ireo olona teo an-tanàna raha vantany vao nitranga ny loza. Tonga teny an-toerana avy hatrany ny mpamonjy voina nampian’ny fokonolona nanao ny fikarohana ireo niharam-boina. Nandeha ny fikarohana ka tamin’ny 10 ora alina (alahady teo ihany) no hita ny razana telo, saingy efa tsy avotra intsony ny ain’izy ireo na teo aza ny fanavotana azy ireo teny amin’ny hopitalin’Antambohobe Fianarantsoa. Ankizikely ny telo amin’ireo niharam-boina ka zazakely vao 11 volana (zafikelin’ilay razana nandrasana) ny iray. Nitohy hatrany ny fikarohana ka omaly vao maraina no hita avokoa ny fatin’ireo olona dimy ambiny voatsindrin’ny tany niaraka tamin’ilay razana nandrasana. Isan’ireo namoy ny ainy ny zanaka lahin’ilay razana nandrasana tamin’io alina io. Nampivarahontsana ny olona tao an-tanàna ny nahita ny fatin’ireto fianakaviana niharam-boina ireto.
Tonga nampahery ny fianakavian’ireo niharam-boina ireo tompon’andraiki-panjakana ao an-toerana. Nandrasana halina tao amin’ny lapan’ny faritra Matsiatra Ambony ny nofo mangatsiakan’ireto fianakaviana sivy mianaka ireto.
Mpivady maty nihotsahan’ny tany tao Antsirabe
Nitrangana loza toy ity koa tao Antsirabe, ny alahady tamin’ny 1 ora maraina. Mpivady indray maty nihotsahan’ny tany tao an-tranony. Mitondra vohoka efa-bolana ilay tovovavy vadin’ilay tovolahy, saingy samy namoy ny ainy izy mivady. Nofaohin’ny ranontany ny tranohazo nitoeran’izy mivady ka tototry ny tany izy ireo. Araka ny fanampim-panazavana voaray, mbola tavela teo am-pandriana ny fatin’ilay tovolahy raha mbola nokarohina tao anaty ranontany kosa ny vadiny.
Fa olona dimy mianaka no lasan’ny rano teo amin’ny tetezana avaratr’Antanifotsy, omaly maraina. Handeha hamonjy tsena niaraka tamin’ny sarety sy entam-barotra izy ireo no navarin’ny rano teo amin’ny tetezana. Vokany, telo mianaka indray namoy ny ainy ka tsy mbola hita popoka ny iray raha avotra kosa ny olona roa. Lasan’ny rano hatramin’ireo entam-barotra nentin’izy ireo.
Mpianatra roa vavy ao amin’ny CEG Sandravinany ao amin’ny Cisco Vangaindrano handeha hamonjy fodiana no namoy ny ainy koa, ny zoma lasa teo rehefa nivadika ny lakana nitondra azy ireo. Vokatry ny fiakaran’ny rano noho ny ora-mikija ny nahatonga ny loza.